ESRI waxay soosaaraysaa daabacaad gaar ah si ay GIS uga dhigto mid ay u fududeyn karaan ardayda jaamacadda - Geofumadas
ESRI waxay soosaaraysaa daabacaad gaar ah si ay GIS uga dhigto mid u sahlan ardayda jaamacadda
Maarso, 2012 ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS
Esri waxay ardayda ArcGIS for Students, oo ah daabacaad gaar ah oo leh horumarkii ugu dambeeyay iyo horumarinta tiknooloojiyada falanqaynta juquraafi iyo loogu talagalay ardayda jaamacadda.
Isticmaalka tiknoolijiyada Esri ee Jaamacadaha iyo baahiyaha gaarka ah iyo shuruudaha ardayda, ayaa ka dhigay EsriArcGIS for Students, qalab gaar ah oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u horumariso mashaariicda, shaqooyinka fasalka iyo baaritaannada khariidadaha, xogta iyo macluumaadka juqraafiyeed. Xalkani wuxuu sahlayaa suurtagalnimada in lala wadaago shaqada isticmaaleyaasha kale iyadoon loo baahnayn horumar iyo adeegsiga macluumaadka jira iyadoo lagu rakibayo qalab kombuyuutar kasta.
"ArcGIS Ardayda waa horumar in xiriirka ee ardayga la GIS iyo waxbarashada, maadooyinka, iwm la ArcGIS for Students ardaydu mar dambe uma baahnaan doonaan inay ku tiirsanaadaan kooxaha jaamacadda, laakiin waxay awoodi doonaan inay ka shaqeeyaan kooxahooda. Waa fursad weyn oo loogu talagalay dhammaan ardayda jaamacadda ee la shaqeeya GIS, maaddaama ay helayaan sahlanaanta tiknoolajiyadaan ",
wuxuu caddeeyay Pedro Rico, oo mas'uul ka ah Waxbarashada Esri Spain.
Arday kasta oo ka diiwaangashan Jaamacadda wuxuu heli karaa ruqsad sanadle ah ArcGIS for Desktop Advanced, oo leh dhammaan balaarinta qiimaha aad u hooseeya. Waxaa intaa dheer, waxay lahaan doontaa macluumaad dheeri ah iyo qalab, iyo sidoo kale siminaaro bilaash ah si loo wanaajiyo isticmaalka qalabka.
Ku sii wadida waxbarashada ee ArcGis for Students
Ogyahay baahida loo qabo in ardayda si ay u tababaraan tartan ee falanqaynta macluumaadka juqraafiyeed, Esri ardayda bixisaa qalabka taageerada kala duwan oo tababar joogto ah oo ku saabsan ArcGIS: xarunta kheyraadka, shirarka, Fikradaha ArcGIS, videos, iwm.
Si loo fududeeyo helitaanka iyo isticmaalka ardayda qalabkooda, Esri wuxuu abaabulaa a Wajiyada Sare , Maalmo gebi ahaanba bilaash ah sannadlaha ah halkaas oo ah qaababka ugu muhiimsan ee cusub ee ArcGIS maadooyinka sare mariyo sida GIS daruur iyo horumarka codsiga mobile waxaa lagu soo bandhigay. Sidoo kale, siminaarada internetka, oo ay abaabulaan Esri, ayaa sidoo kale laga heli karaa dhammaan ardayda bilaash ah iyo bil kasta.
Inbadan oo ku saabsan tikniyoolajiyadda ArcGIS
ArcGIS waa nidaam macluumaad oo dhamaystiran oo kuu ogolaanaya inaad abuurto, falanqiso, duubtid oo aad faafiso xogta, moodooyinka, khariidadaha iyo balloonada ee 3D, taas oo ka dhigaysa inay heli karaan dhamaan isticmaalayaasha iyadoo loo eegayo baahidooda. Sida nidaamka macluumaadka, ArcGIS waxaa laga heli karaa macaamiisha macaamiisha, shabakadaha internetka, iyo kumbuyuutarada moobaylka kuwaas oo ku xirma xafiisyada waaxyaha, shirkadaha dhismaha ama dariiqa xisaabinta (Cloud computing). Horumarinta, ArcGIS waxay bixisaa qalab u oggolaanaya inay abuuraan codsiyadooda.
Sidoo kale, mahadsanid ArcGIS online, xal SaaS oo dhameystiran, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si bilaash ah u sameysid khariidado caqli gal ah oo aad la wadaagto isticmaaleyaasha kale ee GIS ee adduunka ku baahsan tikniyoolajiyadda daruurta.
Dhammaan tababarka GIS
Esri Spain waxay bixisaa seminaaro iyo koorsooyin tababar oo loogu talagalay Esri ardayda ganacsadaha ah, macaamiisha, la-hawlgalayaasha, isticmaalayaasha iyo kuwa aan isticmaaleyn. Tababarkan ayaa ujeedkiisu yahay in la siiyo dadweynaha guud iyo shirkadaha dhammaan aqoonta lagama maarmaanka u ah Nidaamyada Macluumaadka Juqraafi, iyo sidoo kale cusbooneysiin cusub iyo bilaabid qaab dhismeedka GIS ee daruuraha, si ay iyagu marka hore u ogaadaan faa'iidooyinka qalabkan .
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan 2012 Barnaamijka Tababarka GIS ee Bilaashka ah e qoraalada aad ka hubin karto bogga internetka http://www.esri.es/es/eventos/
Ku saabsan Esri Spain
Esri Spain Hadafkeedu waa inay gacan ka geysato horumarinta ururada, siinta wax soo saar tayo leh iyo wax soo saar iyo adeegyo, si looga caawiyo inay gaaraan go'aanno wanaagsan. Esri wuxuu leeyahay khibrad iyo ilo uu ku dabooli karo baahida macaamiisha ee dhinacyada sida Maamulka, Waxbarashada, Kheyraadka Dabiiciga ah, Isgaarsiinta, Adeegyada, Difaaca, Geomarketing, Adeegyada iyo Gaadiidka.
Post Previous" Hore Cybernetic, hosting adeeg weyn
Post Next Nidaamka Macluumaadka Juqraafi iyadoo la adeegsanayo Manifold GISNext »